कानुन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या - Pradesh Today
Homeमुख्य खबरकानुन नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा समस्या
घोराही, १८ फागुन । प्रदेश नं. ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट कानुन नहँुदा समस्या भएका बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन तथा औषधी बिक्री वितरण गर्नको लागि स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताएका हुन् ।
‘अहिले पनि फर्मासिस्टहरुले बिरामी चेकजाँच गर्ने र डाक्टरले औषधी बेच्ने गरेका छन्’ मन्त्री बरालले प्रदेश नं.५ को औषधी थोक व्यवसायीहरुका लागि शनिबार घोराहीमा आयोजना गरिएको एकदिने व्यवहारिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
उनले ‘स्पष्ट नीति र कानुन नहँुदा देखिएको समस्या हो ।’ औषधी व्यवसायीहरुको बीचमा स्वच्छ, स्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा हुन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट गुणस्तर औषधी उत्पादन, बिक्री वितरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । मन्त्री बरालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानको लागि प्रदेशदेखि संघसम्म कानुन निर्माण भएपछि केही सहज हुने उनले बताए ।
उनले लामो समयसम्म देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएका कारण त्यसको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिरहेको बताएका थिए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले नयाँ ऐन बनेपछि अहिले देखिएको समस्या समाधानसँगै नेपालमै औषधि निर्माण गर्न व्यवसायीलाई थप सहजता हुने बताए ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि औषधी ऐनलाई सुधार गर्न लागेको औषधी व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएका थिए । औषधी संवेदनशील वस्तु भएकाले औषधीलाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने र कतिसमय राख्ने ?
भन्नेमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । औषधीको विषयमा बिरामीदेखि औषधी बिक्रेता, चिकित्सकहरु समेत संवेदनशील हुन अनुरोध गरेका थिए ।
देउराली जनता उद्योगका हरिभक्त शर्माले मानिसहरुको प्रत्यक्ष स्वास्थ्यसँग जोडिएको औषधिको उत्पादन, व्यवस्थापन र भण्डारणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । औषधी व्यवसायीहरु राज्यको नियम कानुनको पालना गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङकी प्रमुख सुनिता पौडेलले कतिपय औषधी व्यवसायहरुले विना प्रिस्कीप्सन पनि औषधी वितरण गरेको भेटिएको बताईन् । यस विषयमा औषधी व्यवसायीहरु सचेत रहन अनुरोध गरिन् ।
नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष शालिकराम आचार्यको अध्यक्षतामा कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरुले दाङमा औषधी उद्योग ल्याउनका लागि राज्यले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नुपर्ने, सडक, सञ्चार, नेटलगायतका पूर्वाधारहरुको विकास गर्न समेत सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले दाङमा औषधी उद्योग ल्याउनका लागि राज्यले औद्योगिक क्षेत्र छुट्याउनेदेखि त्यहाँ सडक, सञ्चार, नेटलगायतका पूर्वाधारहरूको विकास गर्नसमेत सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा घोराही उपमहानगर–पालिका नगर प्रमुख नरूलाल चौधरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराज सापकोटा, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम–मुकायम रजिष्टार कैलाशप्रसाद देव, एकोनका बिप्लव अधिकारी,
औषधि आयातकर्ता महासंघका अध्यक्ष पवन श्रेष्ठ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवबहादुर बस्नेत, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसाल,
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखाका अध्यक्ष सविन प्रियासन, नेपाल फार्मेसी संघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज अधिकारी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ दाङका महासचिव तुफानबाबु श्रेष्ठले गरेका थिए ।